ကင်ဂျုံအွန်းကို ဆက်ခံမည်ဟု သတင်းပြေးနေသော ကင်ယိုဂျုံ / Reuters
By ဧရာဝတီ 24 April 2020
အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများ၏ သတင်းများကိုနားထောင်လျှင် ကင်ဂျုံအွန်းသည် ကွယ်လွန်တော့မည်ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား အရာရှိများ၏ သတင်းများကို နားထောင်မည်ဆိုလျှင် ထိုသို့မဟုတ်ပေ။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ သတင်းများကို နားထောင်လျှင် ဘာကိုမျှ သိရမည်မဟုတ်ပေ။
အမှန်တရားမှာ ကင် ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်ပင် မြောက်ကိုရီးယား၏ သေးငယ်လှသော အာဏာရ အထက်လွှာအုပ်စုကလွဲပြီး ကင် မည်မျှဖျားနာနေသည်ကို မသိကြပေ။ သို့သော် ထိုအာဏာရှင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် ကောလာဟလများသည် လွန်ခဲ့သောနွေရာသီကပင် ပျံ့နှံ့နေပြီး သူ၏ အဝလွန်ရောဂါနှင့် မျိုးရိုးတွင် နှလုံးရောဂါရှိသောကြောင့် သူ့နေရာတွင် မည်သူဆက်ခံမည်ကို အာရုံစိုက်လာခြင်းသည် အံ့သြဖွယ် မဟုတ်ပေ။
ထိုအာရုံစိုက်မှု အများစုသည် သူ၏ညီမဖြစ်သော ကင်ယိုဂျုံ ထံသို့ရောက်နေသည်။
ကင်ယိုဂျုံ အဓိပတိခေါင်းဆောင်ကြီး ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြီးအကျယ် သဘောထားကွဲလွဲနေသည်။ သြဇာကြီးမားပြီး အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လှသော အထက်လွှာအုပ်စုတစုက စီမံနေသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံကို အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတဦးက ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု အချို့က ယုံကြည်ကြသည်။ အခြားသူများကမူ သူမသည် မျိုးရိုးအရ ကင်ကို ဆက်ခံသူဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီက အဆင့်မြင့်လူထုအခမ်းအနားများတွင် ၎င်း ပါဝင်လာခြင်းသည် နိုင်ငံကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး သူ့ကို ပြုစုပျိုးထောင်နေသည်ဟု မြင်ကြသည်။
အခြားသူများကမူ ကင် ကွယ်လွန်လျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောသည်။
သို့သော် ပြုံယမ်းတွင် အမျိုးသမီးတဦး အာဏာရခြင်းကြောင့် မြောက်ကိုရီးယား၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒသည် ပျော့ပြောင်းလာမည်ဟု ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
“မစ္စကင်က သူ့အစ်ကို ဒါမှမဟုတ် သူ့အဖေ၊ သူ့အဖိုးတို့ထက်တောင် ပိုပြိး အာဏာရှင်ဆန်နိုင်တယ်” ဟု တာ့ဖ် တက္ကသိုလ် ဖက်လက်ချာကျောင်းမှ ကိုရီးယားရေးရာကျွမ်းကျင်သူ ဆွန်ယွန်းလီက VICE သို့ပြောသည်။
“သူဟာ အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ စွမ်းရည်ရှိကြောင်း ပြသဖို့ အဓိက လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီး အမေရိကန်ကို ရန်စပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အဲဒီမှာချထားတဲ့ အမေရိကန်တပ်တွေကို ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်လာနိုင်တယ်” ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကင်ဂျုံအီ၏ ပဉ္စမနှင့် အငယ်ဆုံးရင်သွေးဖြစ်သော သူ့ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားပြီး သူ၏ မိခင်မှာ ကင်ဂျုံအီ၏ ဒုတိယ ဇနီးဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ဧပြီလ တောင်ကိုးရီးယားသမ္မတ အိမ်ပြာတော်တွင် အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့်အတူ တွေ့ရသော ကင်ယိုဂျုံ
၎င်းကို ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဘန်း မြို့သို့ ပို့ဆောင်စဉ်က ယိုဂျုံသည် အသက် ၉ နှစ်သာရှိသေးပြီး မူလတန်းကျောင်းတက်ခဲ့သည်။ သူနှင့် သူ့အစ်ကို ကင်ဂျုံအွန်းတို့ နီးကပ်သော သံယောဇဉ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာလည်း ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဘန်း မြို့တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် သီးခြားအိမ်တွင် ကိုယ်ပိုင် စားဖိုမှူး၊ ဘဏ္ဍာစိုးဝန်ထမ်းများ၊ သက်တော်စောင့်များဖြင့် နေထိုင်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မှု လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။
ယိုဂျုံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၆ တန်းနှင့် ညီမျှသောပညာရေး ပြီးဆုံးပြီးနောက် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြောက်ကိုရီးယားသို့ပြန်သည်။ နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သူ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို မသိရသလောက်ပင်ဖြစ်သော်လည်း မိသားစုနန်းဆက်တွင် သူ၏ အနာဂတ် အစိတ်အပိုင်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ အစောပိုင်းကပင် တွေ့မြင်ရသည်။ သူ၏ အငယ်ဆုံး သမီးသည် နိုင်ငံရေးတွင် စိတ်ဝင်စားပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးစနစ်တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ၎င်း၏ အဖေက နိုင်ငံခြားသံတမန်များကို ပြောသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြုံယမ်းရှိ ကင်အီဆွန်း တက္ကသိုလ်မှ ကွန်ပျူတာပညာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရပြီး အာဏာရ အလုပ်သမားပါတီတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ လေဖြတ်ဝေဒနာ အကြိမ်ကြိမ် ခံစားရသောအခါ ဖခင်၏ အနီးကပ်လူယုံ ဖြစ်လာသည်။ နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ယိုဂျုံသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖခင်ကွယ်လွန်သောအခါ သူ၏ အစ်ကို အဓိပတိ ခေါင်းဆောင်ကြီး ရာထူး ဆက်ခံရေးအတွက် အစီအစဉ်များကို ကူညီသည်။
သူ၏ အစ်ကိုအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင် ယိုဂျုံသည် အစ်ကိုဖက်တွင် ရှိနေခဲ့ပြီး ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများအပါအဝင် အဆင့်မြင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲများစွာ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သူသည် အစ်ကိုဖြစ်သူက ၎င်းတို့၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ဂျန်ဆောင်သက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု၊ လောင်းကစားမှု၊ မိန်းမလိုက်စားခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ယွင်းခြင်း စသည်တို့ဖြင့် စွပ်စွဲပြီး ကွပ်မျက်ရန် အမိန့်ပေးစဉ်က ကင်၏ အညှာအတာကင်းမဲ့သော သဘောသဘာဝကိုလည်း အနီးကပ် တွေ့မြင်ခဲ့သည်။
ဂျန်ကို လေယာဉ်ပစ်အမြောက်၊ မီးလောင်ဗုံးများဖြင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟု တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကင်ဂျုံအွန်း၏ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် စစ်မြေပြင်ခရီးများကို မှတ်တမ်းတင်သည့် သတင်းထောက်များနှင့် ဓာတ်ပုံဆရာများ ဝတ်လေ့ရှိသည့် သံလွင်စိမ်းရောင် ဂျက်ကက်ဝတ်ဆင်ထာသော ယိုဂျုံကို ဓာတ်ပုံများတွင် တွေ့ရပြီး ကင်၊ သူ၏ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများနှင့် ကမ္ဘာနှင့်ဆက်ဆံရေးများတွင် ယိုဂျုံ၏ သြဇာမှာ ကြီးမားလှသည်။
ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး၊ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် တရုတ်-မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးအထိ ကိစ္စအများအပြားတွင် ၎င်းသည် အရေးပါသော အခန်းမှပါဝင်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား မီဒီယာများက ပြသနေသည်ဟု ယခင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိဟောင်းနှင့် 38 North ၏ ဒါရိုက်တာ ဂျိုအယ် ဝစ်က VICE သို့ပြောသည်။
“ကင်ယိုဂျုံက ပြုံယမ်းရဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ချမှတ်ရာမှာ ပါဝင်သလား၊ ပါဝင်ရင်လည်း ဘယ်လောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကင်ဂျုံအွန်း အစိုးရရဲ့ မူဝါဒချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ အနီးကပ်ပါဝင်မှုအရ သူဟာ သူ့အစ်ကို လျှောက်ခဲ့တဲ့ အလားတူလမ်းကြောင်းကို လိုက်မယ်လို့ ယူဆရတယ်” ဟု ဝစ်က ပြောသည်။
ယိုဂျုံ၏ ဘဝတွင် တခုတည်းသော အမဲစက်မှာ ဒုတိယအကြိမ် ထရမ့်နှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ မအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး ထိုသို့မအောင်မြင်ခြင်းအတွက်လည်း အစ်ကိုဖြစ်သူက ၎င်းကို အပြစ်တင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကင်က သူ့ကို ပါတီ၏ သြဇာကြီးမားလှသော နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်အဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားခဲ့သော်လည်း သူ့ကို ထိုရာထူးတွင် ပြန်လည်ခန့်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား မီဒီယာက လွန်ခဲ့သော တပတ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် သူ့အပေါ် အများပြည်သူအမြင်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည့် မကြာသေးမီက မှတ်သားစရာ ဖြစ်ရပ်များအပြီး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကျည်အစစ်များသုံးကာ စစ်ရေးလေ့ကျင်မှုပြုလုပ်သောကြောင့် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ကန့်ကွက်သောအခါ လွန်ခဲ့သောလအတွင်းက ယိုဂျုံသည် သူ၏ ပထမဆုံး အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို “ကြောက်သောခွေး ဟောင်သည်” ဟု ပြောခဲ့သည်။
ထရမ့်က သူ၏အစ်ကိုထံ စာတစောင်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း လွန်ခဲ့သောလအတွင်းမှာပင် သူက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ အမေရိကန် သမ္မတ၏ အားထုတ်မှုများကို သူက ချီးကျူးသော်လည်း နျူကလီးယား ဖျက်သိမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများတိုးတက်ရန် အမေရိကန်အနေဖြင့် အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း သတိပေးသည်။
ယိုဂျုံ အဓိပတိ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ခြေ
ယိုဂျုံသည် သူ့အစ်ကို၏ လက်အောက်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လာသော်လည်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ စနစ်သည် အမျိုးသမီးများ ထိပ်ဆုံးခေါင်းဆောင် မဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း တချို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
“မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ဝါစဉ်မြင့်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းကို လေးစားတဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ်စ် နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ကင်ယိုဂျုံဟာ ကင်ဂျုံအွန်း အယုံကြည်ရဆုံး မဟာမိတ်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီထက်တော့ပိုပြီး ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဆစ်ဒနီ စီမံခန့်ခွဲရေး နိုင်ငံတကာကောလိပ်မှ ဝါရင့်ကထိကနှင့် မြောက်ကိုရီးယားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ လီယွန်နစ် ပက်ထရော့က VICE သို့ ပြောသည်။
၂၀၁၈ ဇွန်လ စင်ကာပူတွင် အမေရိကန်နှင့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် အစ်ကိုဖြစ်သူနှင့်အတူ တွေ့ရသော ကင်ယိုဂျုံ/Reuters
အာဏာအများအပြား ဆုပ်ကိုင်ထားသူ မော်စီတုန်း၏ ဇနီး ခံစားခဲ့ရသည့် ကံကြမ္မာနှင့်အလားတူ သူ၏ အစ်ကို ကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ယိုဂျုံသည် အာဏာကိုထိန်းထားရန် ကြိုးစားသူများ၏ အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
“ကင်ဂျုံအွန်း ကွယ်လွန်ရင် ဒါမှမဟုတ် ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ရင် ယိုဂျုံဟာ မော်ကွယ်လွန်ပြီးမကြာမီ ပါတီဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ စွပ်စွဲ ထောင်ချခံရတဲ့ မဒမ်မော် သို့မဟုတ် ကျန်းချင်းရဲ့ ကံကြမ္မာမျိုးကို ခံစားရနိုင်တယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
သို့သော် အခြားသူများက အခြေအနေကို ထိုမျှ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်မည်ဟု မယုံကြည်ကြပေ။
သို့သော် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ခေတ်များတွင်ပင် အရှေ့အာရှမှ အမျိုးသမီးအနည်းငယ်သည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်လာတတ်ကြသည်။
“မဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပေမယ့် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ စနစ်က အရမ်းကို ခေတ်နောက်ကျပြီး လိင်ခွဲခြားတဲ့ စနစ်တခုဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတယောက်အောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကို အဲဒီစနစ်ထဲက လူအများအပြားက ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟု လန်ဒန်ရှိ SOAS China Institute မှ စတိဗ် ဆန် က VICE သို့ပြောသည်။
“ဒါပေမယ့် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ခေတ်မှာတောင်မှ အရှေ့အာရှက အမျိုးသမီးအနည်းငယ်ဟာ အချုပ်အခြာပိုင် သို့မဟုတ် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာတာရှိတယ်” ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
ယိုဂျုံ၏ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာရှိ အဆင့်မြင့်အခမ်းအနားများတွင် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ယခင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် သွေးသားတော်စပ်မှုကြောင့် သူသည် ခေါင်းဆောင်လောင်း ဖြစ်လာကြောင်း ထင်ရှားသည်ဟု အချို့ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။
“ကင်မိသားစုဟာ သမ္မတနိုင်ငံထက် မင်းဆက်ပုံစံဆိုတော့ သူဟာ မျိုးရိုးအရ ရာထူးဆက်ခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်။ သူ့အတွက်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ ဆက်လက်တည်တံ့ရေးအတွက် သူဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက သိနေတဲ့သူတဦးဖြစ်တယ်။ သူက ထရမ့်နဲ့၊ ရှီနဲ့၊ မွန်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖူးတယ်။ သူဟာ မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့ဘက်က ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးမျိုး ပြသနိုင်တယ်” ဟု ကိုရီးယားရေးရာကျွမ်းကျင်သူ ဆွန်ယွန်းလီက ပြောသည်။
38 North ၏ ဒါရိုက်တာ ဂျိုအယ် ဝစ်သည် လျှို့ဝှက် နျူကလီးယားအစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ယူဆရသော နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ တည်ဆောက်လည်ပတ်ရေး ဆိုင်းငံ့ထားရန် ပြုံယမ်းနှင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်က ကူညီဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံအရင့်ဆုံး မြောက်ကိုရီးယားရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။
ကင်ဂျုံအွန်း ကွယ်လွန်လျှင် ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်များကောင်စီ၏ ရုပ်ပြခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကင်ယိုဂျုံ အာဏာရလာခြင်းနှင့် မိသားစုဝင်မဟုတ်သာ အခြားတဦး အာဏာရလာခြင်း အပါအဝင် အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ အများအပြားရှိကြောင်း သူက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ဆယ်စုနှစ်များစွာ မြောက်ကိုရီးယားကို လေ့လာခဲ့သော သူ၏ အတွေ့အကြုံအရ ကင်ဂျုံအွန်း ကွယ်လွန်လျှင် မည်သို့ဖြစ်မည်ဟု သူထင်သနည်း။
“ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျနော်လည်း ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိဘူး” ဟု ဝစ်က ပြောသည်။
သူက ကင်ဂျုံအွန်း အာဏာမရမီက ခန့်မှန်းချက်များသည် လုံး၀ မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်ကို သူက ထောက်ပြသည်။
“ကင်ဂျုံအွန်းဟာ သူ့ဦးလေး ဂျန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဝါရင့်ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ရဲ့ ရုပ်ပြခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရမယ်လို့ လောင်းခဲ့ကြတာလေ။ နောက်တော့ ဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတာ အားလုံးအသိပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
(Vice အွန်လိုင်းသတင်းဌာနမှ Kim Jong Un’s Sister Could Replace Him If He Dies. Who Is Kim Yo Jong? ကို ဘာသာပြန်သည်။)
ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် တရုတ် အမြတ်ထုတ်
ကိုဗစ်-၁၉ က ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကို စမ်းသပ်နေ
Covid-19 က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကို ပုံစံသစ် ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်
Topics: ကင်ဂျုံအန်, ကင်ယိုဂျုံ, ထရမ့်, မြောက်ကိုရီးယား, အမေရိကန်